Posted by blackroze at Wednesday, February 08, 2012
မေမြို့မိုး on 8 February 2012 at 04:21 said...
ဂယ် လက်သံပြောင်တာပဲ.. ဒိန်းဂျားပဲ. အစ်မ ကြောက်ကြောက်နဲ့ဖတ်သွားတယ်
မောင်မောင် on 8 February 2012 at 04:52 said...
အစ်မပုံက ၀ါးဝါးလေးတင်ထားတယ် လှပါတယ် အစ်မပစ်ပစ်က ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ပဲပေးနေတယ်
ချစ်စံအိမ် on 8 February 2012 at 05:42 said...
Aung Htut on 8 February 2012 at 07:24 said...
အေးဂျင့်ကြီးက အတော်ဆော့သကိုး.... လွမ်းစရာ ငယ်ဘ၀လေးကို အားပါးတရ ဖတ်ရင်း ပြုံးသွားပါတယ် ခင်ဗျာ။
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! on 8 February 2012 at 07:32 said...
ငယ်ငယ်တုန်းက ဒီလောက်ဆိုးခဲ့ပြီးပြီဆိုပြီး ခုရော လိမ္မာနေပြီလားမမ :):)
မဒမ်ကိုး on 8 February 2012 at 08:42 said...
ကဲချက်ကတော့အေ ငါ့သမီးလို့မပြောရဘူး တော်တော်တူသဟဲ့
Candy on 8 February 2012 at 11:15 said...
စီအိုင်အေ ပစ်ပစ်က တော်တော်သောင်းကျန်းခဲ့တာပဲ ဟီးဟီး :D :P
san htun on 8 February 2012 at 11:20 said...
နေ၀သန် on 8 February 2012 at 12:34 said...
:P.. ဖတ်လာရင်းနဲ့ အောက်ဆုံးက ပုံလေးကို အတော်သဘောကျသွားတယ်.. တော်တော်စွာပြီးဆိုးမယ့်ပုံပဲနော်... :P
...အလင်းစက်များ on 8 February 2012 at 17:39 said...
ငယ်ငယ်ကထဲက စွာတေကို လန်နေတာပဲ။ ပြောမရ ဆိုမရလေး။ ငဖယ်တေ ကို တေနေမယ်ဟာလေး။ ပြန်မပြော နားမထောင်လေး။ နေရာ တစ်ကာ ထစ်ခနဲ့ချမယ် ခုတ်မယ် ဆိုတဲ့ဟာလေး။
ချိုတူးဆိုတာ ငါဘဲ။ :P
(မှတ်ပလား စီအိုင်အေ ပစ်ပစ်)
ပုံမပါရင် ပြောမှာစိုးလို့ ထင်တယ် ဟိဟိ ၂ပုံတောင်မှ အဖြူမဲ ပုံလေးက ချောထှာ..
jasmine(တောင်ကြီး) on 8 February 2012 at 23:53 said...
ညီရဲ on9February 2012 at 12:48 said...
ငါ့သူငယ်ချင်းက... ငယ်ငယ်တုန်းက ကလေးဆိုးကြီးပေါ့...
မောင်ဘုန်း on9February 2012 at 22:57 said...
ဖွားဘက်တော် များ ဖြစ်နေမလား ... အမေရိကန် ဆေးရုံ အသက် သုံးဆယ် နီး တဲ့ .....
KO2 on 15 February 2012 at 14:23 said...
နင် ငယ်ငယ်တုန်းက တော်တော်လိမ္မာသားပဲ ဟီးဟီး ။။